Webtrends 9 Gaarsiiyay: Dhamaaday Dhammaan Waxyaabaha Laga Filayo | Martech Zone
Talaado, Agoosto 4, 2009 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Bishii Abriil 2009, Maamulaha Guud ee Webtrends Alex Yoder wuxuu hor istaagay macaamiishiisa, saxaafadda, falanqeeyayaasha iyo guddoonkiisa wuxuuna ballan qaaday in Webtrends ay gaarsiin doonaan aragtida khibrada isticmaale cusub. Waxaan weydiiyay su'aasha… miyuu Webtrends si fudud u magacawday mise dib baa loo dhalaa?
Jawaabtu waxay timid maanta… Alex iyo kooxdiisuna way heleen Bixiyay... Webtrends is dib u dhiska!
Waxaan fursad u helay in aan ku indho sarcaado Webtrends interface hore oo waxay umuuqatay inay jirtay toban sano (waa laga yaabaa inay ahayd!). Interface cusub oo leh Webtrends 9 waa mid xarrago leh, fudud, nadiif ah oo leh adeegsi aan caadi ahayn. Waxay u egtahay sidii aad u fariisatay Mercedes cusub.
Markaad ku quusto faahfaahinta koontada la siiyay, hase yeeshee, waad awoodi kartaa si habsami leh u dhex mar ama warbixin ilaa warbixin, koonto ilaa xisaab, ama dooro aragtiyo kala duwan (midig kore)
Aragtiyadu waxay leeyihiin dhowr astaamo nifty oo u gaar ah, sida aragtida sheekada… Kaas oo soo jiidaya xogtaada kuna ridaya Ingiriisi guud. Tani waa muuqaal fiiqan oo loogu talagalay warbixinta fulinta:
Waxaa jira aragti miis ah… oo aad macno ahaan u samayn karto nuqul iyo Jinka oo ilaali qaabeynta unugyada:
Waxaa jira labo astaamaha kacaanka, in kastoo, taasi dareenkeyga qabatay.
Astaamaha ugu horreeya waa inuu ahaadaa muuqaal ka mid ah hubka urur kasta haddii ay rabaan inay ka dhigaan barnaamijyadooda mid fudud oo la is dhexgeli karo. Muuqaalkaasi waa awoodda lagu gujin karo wadaag isla markaana lagu soo ceshan karo xogta dhabta ah ee ku jirta Excel, XML ama dib u hel REST-ga dhabta ah API call! Cajiib!
Muuqaalka weyn ee aan aaminsanahay inuu ruxin doono aasaaska adduunka Falanqaynta ayaa ah awooda dul mari wax kasta oo RSS ah macluumaadkaaga! Suuqgeynta qadka tooska ah si isbadel ah ayey isku bedeshay dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyadoo qiyaasaha ka baxsan goobta ay si toos ah u saameynayaan tirooyinka internetka. Awoodda lagu dabooli karo a Raadinta Twitter, Wararka, Blog-kaaga, cimilada… liistadu waa mid aan dhammaad lahayn!
Isku xirka isticmaalaha cusub ayaa laga soo saaray iyaga API - tallaabo bixisa dabacsanaan aan caadi ahayn oo lagu horumariyo qaabab cusub, warbixinno cusub iyo astaamo cusub.
Mahadsanid Alex iyo kooxdiisa Webtrends. Dhamaan macaamiisha waxay u haajireen interface cusub maanta iyo reaction leeyahay si aan caadi aheyn u fiicnaa.
Miyaan sheegay in ay ku socoto iPhone-ka, sidoo kale?
2,000 dhajiis oo aan hada bilaabayno!